EUA FDA oo nadiifisay wajiyadda KN95 waligood kuma hooseynin Amazon - BGR - teles relay
AirPods burburin, $ 2 waji qarsoodi ah KN95, kamarad aan duuliye lahayn oo 4K ah, Ring Doorbell Pro,…
Waxyaabaha loo yaqaan 'FDA EUA-idam' ee loo yaqaan 'KN95' waji-daboolan, Photoshop wasakh ah, 46% ka baxsan Chromebook,…
5 Amazon iibiyayaal ah oo ugu dambeyntii dib ugu soo laabtay keydkoodii kadib ...
Haddii aad ku iibsato badeecad ama adeeg madax-bannaan qiimeyn adigoo adeegsanaya xiriiriye on
waxaa laga yaabaa inaan helno komishan gacansaar leh.
Wajiyadda Powecom KN95 waa waji-iibinta wajiga ugu iibinta badan tan iyo markii uu bilaabmay cudurka faafa ee coronavirus.
Waxay ahaayeen $ 45 halkii 10-xirmo waqtigaas, laakiin hadda waxay ku jiraan iibinta qiimaha ugu hooseeya ee aan waligeen ku aragno Amazon.
Isla shirkadda ayaa sidoo kale bixisa Maaskarada Powecom KN95 oo leh xirmooyin laastik ah in dadka qaarkiis ay helaan raaxo iyo ammaan badan.
Dr Anthony Fauci iyo khubaro kale oo caafimaad oo aan la soo koobi karin ayaa ina xasuusiya inta badan ee ay awoodaan sida ay muhiimka u tahay in la feejignaado. Tirada maalinlaha ah ee kiisaska coronavirus-ka ayaa hadda hoos uga sii dhacaya Mareykanka gudihiisna dhowr tallaal oo coronavirus ah ayaa hadda la qaadanayaa, waana war aad u wanaagsan. Taasi weli macnaheedu maahan inaan iska ilaalin karno ilaalinteena, Dr Fauci wuxuu si joogta ah noogu sheegay inay tahay inaan sii wadno xirashada wejiga oo aan ku dhaqanno kala fogaanshaha bulshada markasta oo aan ka baxno guryaheena.
Tani waxay u egtahay inay noqon doonto kiiska ugu yaraan hal sano, khubaradu waxay yiraahdaan, taas oo ah sababta hadda loo joogo waqtigii dib loo cusbooneysiin lahaa wejigaaga bixinta - iyo Amazon waxay leedahay heshiisyo yar oo ay tahay inaad iska hubiso.
Maaskarada wajiga ee loo yaqaan 'KN95 mask' (FDA EUA list), oo ka kooban 10, kiish ziplock kuleyl leh oo kul-kuluuban, dhego-furan, diyaarad… Liiska qiimaha:20,60 $ Price:$ 19,60 ($ 1,96 / lambar) Waxaad badbaadinaysaa:1,00 USD (5%)
Waxaa laga heli karaa Amazon, BGR waxaa laga yaabaa inuu helo guddi Hadda iibso
Iskusoo wada duuboo, iibiyaha Wajiyadda Powecom KN95 ayaa hadda lagu iibinayaa qiimo dhimis weyn oo ku timid Amazon. Maaskaradan ayaa ah FDA EUA la nadiifiyey waana sababta ay caan u yihiin. Laakiin waxaa jira sabab kale oo inbadan oo aqristayaasheena ah ay kaydsanaayeen iyaga waayadan: Waxay hada ku jiraan iibka qiimaha ugu hooseeya ee aan waligeen ku aragnay Amazon!
Ku soo noqo maalmihii hore ee cudurka faafa ee coronavirus iyo xagaaga, 10 xirmo oo ah maaskaro loo yaqaan 'Powecom KN95' oo lagu daboolay ilaa $ 45. Hada, hadaad deg degto, waxaad ku iibsan kartaa isla 10-xirmo kaliya $ 14,99. Waa waalan tahay!
Haddii aad diyaar u tahay inaad wax yar ka bixiso, sidoo kale waad heli doontaa Maaskarada Powecom KN95 oo leh xirmooyin laastik ah dib ugulaabasho hadda Amazon. Waxay ku kacayaan $ 11 in ka badan halkii xirmo ee 10 marka loo eego waji-dhegaha dhagta dambe ee Powecom, laakiin dad badan ayaa u arkaa suumanka laastikada inay ka ammaan iyo raaxo badan yihiin wejiga dambe ee dhegaha.
Haddii Powecom uusan ahayn koobki shaahaaga ama aad kaliya rabto inaad isku daydo nooc kale oo maaskaro ah si aad u aragto midka aad doorbideyso, waxaa jira shirkad kale oo ugu iibsiga badan oo hadda lagu iibinayo Amazon. Waa mid abid caan ah Maaskarada wajiga loo yaqaan 'AccuMed' in Akhristeyaasheena aad u jeclaadaan.
Madaxa u gudub Amazon hadda waadna heli doontaa Maaskarada dhegta gadaal loo dhigto AccuMed et Maaskarada madaxa AccuMed labaduba waxay kujiraan keydka kadib markii la iibiyey horaantii bisha. Dheeraad ah, labaduba waxay ku iibinayaan qiimo jaban oo aan waligeen aragnay! Hada xaqiiqdii waa wakhti aad ufiican oo lagu kaydin karo wajiyadan cabsida leh ee laga heli karo dhowr midab oo kala duwan - oo ay ku jiraan madow - markaa dhaqso u qabso oo xir xirmo 10 ah ka hor inta aysan iibin mar kale.
Maaskarada wajiga loo yaqaan 'AccuMed', madow (10 unug) Liiska qiimaha:26,25 $ Price:19,99 $ Waxaad badbaadinaysaa:$ 6,26 (24%)
Maaskarada wajiga loo yaqaan 'AccuMed' (madaxa), madow (10 cutub) Liiska qiimaha:26,25 $ Price:19,99 $ Waxaad badbaadinaysaa:$ 6,26 (24%)
raac @BGRDeals on Twitter si aan ula socono heshiisyadii ugu dambeeyay uguna weynaa ee aan ka helno shabakada. Qiimayaasha waa la beddeli karaa ogeysiis la'aan iyo rasiidhyada kor ku xusan waxaa laga heli karaa tiro xadidan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore (Ingiriis) https://bgr.com/2021/02/22/kn95-masks-amazon-prime-fda-eua-powecom-sale/
TELES RELAY 40676 posts 1 comments
Duulimaadyada AirPods, $ 2 maaskarada KN95, 4K kamarad duuliye ah, Ring Doorbell Pro, inbadan - BGR
Wajiyadda loo yaqaan 'FDA EUA-idman KN95, iibinta Photoshop, 46% ayaa laga dhimay Chromebook, in ka badan - BGR
5 Amazon kuwa ugu fiican ee ugu dambeyntii dib ugu soo laabtay ka dib markii ay iibiyaan -…
Sidee Amazon ugu iibisaa samaacadaha dhagaha aan runta laheyn oo leh 120000 qiimeyn 5-Star…